Baxsiga jacaylka ee lamaanaha: tilmaamaha iyo meelaha loo socdo | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waxaad mararka qaar qorsheyneysaa lammaanahaaga si a ka bax jacayl. Mararka qaarkood waxaan ku habboonaaneynaa baxnaankan waxaanan u maleyneynaa in wax walbaa ay noqdaan kuwo hagaagsan. Waa inaad tixgelisaa dhinacyo muhiim ah markaad qorsheyneyso baxsi midkood lammaanahaaga ama uu weheliyo saaxiib. Waa inaad yeelataa xamaasad, sixir, qiiro, hal-abuur iyo ka-qaybgal. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in lagu xisaabtamo qodobo ka dhigi doona qorshahan lama iloobaan.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo qorsheeyo baxsigaaga jacaylka, laakiin waxaan ku sharaxeynaa halkan.
1 Xulo meel aan idil ahayn
2 Baxsasho jacayl oo yaab leh
3 Nasasho jaceyl ah oo nasasho ah
4 Meelaha Dalxiiska loo tago
Xulo meel aan idil ahayn
Markaad qorsheyneyso baxsiga jaceylka, deegaanka aan ku fulineyno waa qeybta ugu weyn. Waa inaad doorataa aag kuu oggolaanaya inaad yeelato asturnaan weyn iyo qorshooyin aad labadiinaba ku wada qanacsan tihiin. In kasta oo waxa lagama maarmaanka u ah baxsiintu ay tahay shirkad wanaagsan, haddana waxaa muhiim ah in go'aan laga gaadho goob aad ku dareemayso inay yihiin jilaayaashii runta ahaa mar walba.
Meelaha qaarkood ee dadku soo jeediyeen ayaa ah meelaha aad ku raaxeysan karto maadaama ay ku dhex jirto dabeecadda in midba midka kale diiradda saaro. Ku habboon ayaa ah Ha haysanin waxyaabo badan oo kaa mashquuliya kuwaas oo waqti ka qaata lammaanahaaga oo aad diiradda saarta iyada. Waa fikrad fiican in lagu raaxeysto nabada, isu soo dhawaanshaha iyo ka wada baxsiga waxyaabaha caadiga ah iyo dhibaatooyinka maalinba maalinta ka dambeysa wada socda. Sidan ayaad u maaraynaysaa inaad midba midka kale ka rarto dhibaatooyinka maalinlaha ah. Meeshu waa inay noqotaa wax naga dhigaya aamusnaan iyo inaan isku soo dhawaano.
Deegaanka dabiiciga ahi wuxuu noqon karaa fikrad aad u wanaagsan, magaalo ay ku yar yihiin dadka deggan iyo meel miyi ah oo loo tago.
Baxsasho jacayl oo yaab leh
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah in la daryeelo ayaa ah inay tahay wax lala yaabo. Hadday tahay qorshe dhammaadka wiigga ah, waxa ugu fiican ayaa ah in qofka kale aanu filayn. Tan awgeed, waxaa muhiim ah in la hubiyo taariikhda saxda ah oo laga feejignaado in qofka kale uusan sameyn doonin wax qorshe ah isla mar ahaantaana, uusan waxba ka shakin.
Marka aad ku baxdo jacaylka jacaylka, waxaad sugi kartaa daqiiqad cajiib ah si aad u diyaariso hadiyad gaar ah. Hadiyadan waxaa qarin doona aayaheena oo sugi ilaa daqiiqada saxda ah ee aan dhaleyno. Hadiyaddan ama waad isku qasan kartaa sawirro qaar oo aad haysatid waa wada jir si aad u siiso taabasho shaqsiyeed. Waxa kale oo aad ku dari kartaa warqad aad isweydaarsatay oo aad u malayn kartaa in hadiyadaha gacmaha lagu sameeyo ay u muuqdaan inay leeyihiin wax qiimo badan Maaha wax aad u badan sidii aad u iibsan lahayd wax qofka kale doonayo, laakiin waa wax aad naftaada u sharaxday in muddo ah. Halkan sidoo kale hal-abuurnimada iyo hindisaha aad ayaa loo qiimeeyaa.
Ugu dambeyntiina, sidoo kale waxaad kuheli kartaa casho jaceyl hoostiisa shumaca diiran si aad ugudarsato xoogaa diirimaad kulanka. Faahfaahintaan waxay calaamadeyn doontaa kala duwanaanshaha dhammaan kala duwanaanshaha aad ku leedahay lamaanaha.
Nasasho jaceyl ah oo nasasho ah
Muuqaalka kale ee muhiimka ah ee ka-baxsiga jacaylka ayaa ah inay tahay wax nasasho leh. Waa inaad ka go'daa mashquulka maalinba maalinta ka dambeysa waana inaad midba midka kale diirada saartaa. Waxaad naftaada siin kartaa duugitaan kaa caawin doona inaad tirtirto walbahaarka, isdejiso oo yareyso xiisadda jirka. Intaas waxaa sii dheer, waad kordhin kartaa ladnaanta jirka iyo maskaxda. Dareenadan oo dhami way sii kordhayaan haddii lala sameeyo lammaanahaaga.
Waxa kale oo aad dareemi kartaa mid qaas ah adigoo ku raaxeysanaya quraacda sariirta. Marka sariirta adigu aan adigu ahayn oo aadan u baahnayn inaad nadiifiso ka dib, waxaad ku raaxeysan kartaa quraacda sariirta adigoon qoomamaynin. Kaliya waa inaad ka fikirtaa bilaabida maalinta fasaxa adigoon haysan wax masuuliyad ah oo ku xigta lamaanahaaga oo aad ugu raaxeysatid quraac macaan oo aanad u baahnayn inaad diyaariso. Quraacdu waxay ka koobnaan kartaa cuntooyin kala duwan si loogu dhiirrigeliyo inay wax gaar ah noqdaan. Ha u tagin rootiga caadiga ah ee rootiga quraacda ah.
Meeshan loogu kala baxayo qaabkan badanaa waa hudheelo loogu talo galay lammaanayaasha waana badanaa meelaha jacaylka badan. Hoteeladan loo bartay lammaanaha samaynaya qorshayaal kala duwan waxay u muuqdaan inay leeyihiin hawlo badan oo ay qabtaan. Tusaalooyinka qaarkood waa tubbada kulul ama jacuzzi qolka. Waxa aan soo sheegnay ka hor quraacda qolkaaga waxay noqon karaan fikrad aad u fiican.
Hoteelladaas leh spa waxaa loo isticmaalaa inay ku raaxaystaan ​​fadhi kuleyl ah, duugis lamaanayaal ah ama waxoogaa daaweyn wajiga iyo jirka ah. Cashada ugu dambeysa ee jaceylka leh khamri wanaagsan, maalinta waa la dhameyn doonaa. Faahfaahin kaa caawin karta, xitaa haddii ay tahay wax qaali ah, Waxay codsanaysaa in qolka laga daaho oo aan la gaarin 12. Waxaa macquul ah inay go'yaalku kugu dhegan yihiin oo aad rabto inaad lamaanahaaga kula raaxeyso waqti dheer adigoon ku deg degin.
Waxaad kala dooran kartaa meelaha dalxiis ee kaladuwan iyadoo kuxiran dhadhanka lamaanaha. Waad dooran kartaa inaad doorato meelahaas oo ay ka jiraan waxqabad xoogaa ka xiiso badan. Tusaale ahaan, Waad sameyn kartaa kayaking, boodbooda bungee, fuulitaanka, qadka zip, iwm Qorshayaashan waxaa loogu talagalay lammaanahaas dameerka nasan. Waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa aragtiyo wanaagsan oo ku yaal muuqaalka xeebta iyo buuraha labadaba. Tani waa halka ay tahay inaad ka dhiibato male-awaalkaaga.
Muuqaal kale oo aasaasi ah oo lagu xisaabtamo waa waqtiga sanadka. Haddii ay tahay Kirismas, waxaa ugu wanaagsan in la helo aag loogu dabaaldego kirismaska ​​qaabkiisa. Waa inaad raadisaa dhacdooyin gaar ah si aad u awoodo inaad sameyso waxqabadyo gaar ah oo aan la ilaawi karin. Waa waxqabadyadan naga caawin doona inaan ku xasuusano dalxiiskeenna jacaylka sidii wax aan laga gudbi karin.
Ha iloobin in qorshayaashu ay ahaadaan kuwo gaar ah maadaama ay tahay munaasabad ka duwan tii hore. Wax aad u yar baa jira oo madaxaaga jabiya aad u badan tan iyo markii Xaqiiqda fudud ee ku saabsan sameynta wax ka duwan oo gaar ah lamaanahaaga ayaa durba qeyb ka ah baxsashada jacaylka waxayna inagu xirnaan doontaa in safarkan aan la iloobi karin.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkani kaa caawin doono qorsheynta baxsiga jacaylka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Baxsi jacayl